people Nepal » ‘S’ बाट नाम सुरु हुनेहरु कस्ता हुन्छन् ? ‘S’ बाट नाम सुरु हुनेहरु कस्ता हुन्छन् ? – people Nepal
‘S’ बाट नाम सुरु हुनेहरु कस्ता हुन्छन् ?
थुप्रै विशेषताका साथै उनीहरुका अवगुण पनि छन् । यी व्यक्तिहरु रिसाहा हुन्छन् । यतिमात्र नभई स्थान र परिस्थितीको ख्याल नगरी उनीहरु आफ्ना भित्री कुराहरु भन्ने गर्दछन् जसका कारण दोस्ती, व्यापार र सम्बन्धमा तनावको स्थितीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । एजेन्सी